> Resource > Free > Top 5 Best Free Wmv Video Joiners
Video joiner bixisaa xal kama dambaysta ah ee midayn laba ama in ka badan video clips ku file ah oo isku mid ah. Sifo badan ee joiner video inay tahay in Galiyo ama biiray video clips ka mid ah labada file isku mid ah iyo qaab file kala duwan waqti. Baadhitaanka wmv video ah joiner tayo sare leh waa arrin hawl aad u dhib; laakiin halkan waa xal u ah dhammaan su'aalahaaga; qaar ka mid ah lagu kalsoon yahay oo waari kara video wmv free joiners la siiyaa hoos ku qoran:
Media biiro user saaxiibtinimo iyo freeware joiner in ay taageertaa badan oo qaabab video sida regelingen, wmv, MPEG, MP3 iyo OGG. Waxa aad bixisaa habka sahlan oo ay raacaan si ay ugu biiraan qaybaha yar qaab video kaliya, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan file talooyin iyo qaabka file saarka dhibic ka hoos menu, hawlgalka diyaarinta video clips ku galay isku xigxiga oo markaas iyaga ku milmaan galay hal file video ah waxa sameeya Media biiro.
Waxay bixisaa kala duwan video maqal iyo goobaha;
Awood u user ay u sheeg codecs riixo u audio iyo video profiles.
Oo ay taageerayaan versions kooban oo daaqadaha.
Easy video joiner bixisaa siyaabaha inuu ku biiro videos kala duwan ee MPEG, AVI, wmv iyo files ASF galay file a movie hal. Isticmaalka this video ku biiro software, user karo tiro aan xad lahayn si fudud ku biirto of videos maadaama ay si dhakhso ah u habayn kartaa amarka videos haddii loo baahan yahay ka hor inta uusan ku biirin video clips ku soo xulay. User ayaa horumarin karaan oo ku istareexi filim tayo fiican leh oo aan la dhexgelin kasta.
Taageerada audio iyo video files labadaba;
Easy in ay isticmaalaan iyo bixiyaa jawaab degdeg ah;
Taageerada dhabta ah warbaahinta iyo daaqadaha files warbaahinta.
Loo baahan yahay in ka badan optimized oo xasiloon.
Kate ayaa Video Joiner waa software free kuu oggolaanaysa in dadka isticmaala ku soo biiraan badan qaabab video hab ku haboon. Its user saaxiibtinimo interface ayaa lagu qasbay isticmaala si aad u hesho gunnada ee tirada qaababka si ay isu geeyo kala duwan video clips marayo habab cusub oo hal abuur leh.
Free video joiner isticmaala awood u leeyahay in uu doorto files aqbasho video in la helo oo ku biiray galay file a video waaweyn. Waxa ay taageertaa qaabab dhowr ah oo kala duwan sida MOV, AVI, wmv, MPEG, DVD, VCD iyo MP4. Waxay leedahay interface fudud in bandhigayaa button add ah, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala ay ku darto badan clips video inuu doonayo inuu; Intaas waxaa sii dheer, waxa ay hubisaa in aanay jirin xog gaartay iyo bixisaa file saarka tayo sare leh.
Tirada videos la isku wada dheggan yihiin karaa hab fudud oo lagu qeexaa;
Waxay bixiyaan natiijada tayo sare leh.
No taageero media player.
Warshadda Qaabka waa mid ka mid ah barnaamijyada software video tafatirka qiimo leh in dadka isticmaala ay awood in ay isku daraan dhawr kala duwan video maqal iyo durdurrada si habboon. Taageeridda badan qaabab video, software loo isticmaalo in lagu midowdo faylasha video iyo files audio. Waxaa la iman noocyo kala duwan oo muuqaalada u saamaxaya in ay ku raaxaystaan ​​jecel videos iyaga oo u wada ducaysay la isku qasin, user waxay kalee codsan karaan tirada audio iyo video goobaha o sameeyo video la mideeyey qiimihiisu-seen.
Samaynaya hawlaha kala duwan sida video saarida, soo biiray video iyo video abuurka;
Taageerada video, audio iyo qaab sawir;
Kuu ogolaanayaa tafatirka video hor diinta faylka.
Kujira dar-iib ah.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa video editor xirfadle weli si sahlan loo isticmaalo. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan oo ay ku jiraan qaabab video wmv, MP4, FLV, MOV, AVI iyo in ka badan. Just meel clips video on waqtiga ay beegsadeen "Abuur"; waxaad ku biiri kartaa oo kala duwan videos wada jir ah ula qasabno yar. Si aad ku dari dambe ku taaban gaarka ah si aad videos, waxa kale oo aad ka dalban kartaa kala guurka iyo saamaynta kale.